Ciyaaraha qeexitaanka sare u muuqataa caanka ah ee muddooyinkii dhowaa. Si kastaba ha ahaatee, horumarka cusub ee beerta animations iyo naqshadeynta, dunida ka mid ah ciyaaraha ayaa waqti ka waqti bedelay. Mid ka mid ah tusaale ahaan kaamil ah si ay u caddeeyaan barta waa kacaankii 4k. Technology 4k keenay isbedelka wayn ee waayo-aragnimo ah arkaysid ee ciyaaraha. Iyadoo afar jeer ku pixels loo isticmaalo in 1920 X 1080 screens, 4k ciyaaraha ee kormeerayaasha 4k waa talaabo cusub oo dhinaca kala duwan midabka iyo pixel tayada ballaaran in loo soo bandhigi karo in dadka isticmaala ay. Xirnaanta ayaa si sahlan yahay sida cherry ku hawlan kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u la kulmaan waxqabadka daanka-tagtey hufan on kaliya feature fur iyo play ah.
Qeybta 1: ugu sareysa 5 kulan oo waxay kaa caawin kartaa inay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo ciyaaraha 4k yihiin
Qeybta 2: Top 3 GOOBJOOGAYAAL kulan 4k
Qeybta 1: ugu sareysa 5 kulan oo kaa caawin karaan inaad ku raaxaysato waayo-aragnimo 4k ciyaaraha yihiin,
Witcher ayaa 3: Wild Hunt
Kulankaan ayaa waxaa lagu ciyaaray saddexaad-qof aragti. Ciyaarta ayaa waxaa laga heli karaa technology 4k oo aad ku helayso deegaanka ah oo aad u faahfaahsan oo ah qaab bandhigay HD aalladda. Laga soo bilaabo Hooskiisu naqshadaha iyo dhulka ku hareeraysan dabiiciga ah, 3 Witcher ayaa ku qurxoon yahay inta badan ciyaartoyda. Ilaa hadda, ciyaarta ku guulaystay in uu gaaro dhaleecayn iyo dib u eegista wanaagsan oo aan la sahlan oo aan technology 4K ah. Publications yihiin oo sidoo kale lagu kulankaan mid ka mid ah middiyo ugu fiican sameeyay. Eegin ciyaarta adkeyneyna 2013 dhista ama ma, waxaa xaqiiqo ah u muuqataa arrin cabsi badan ee 4K.
Show Ciid Down
Ciyaarta tartanka waxa uu leeyahay neefta qaadashada daqiiqado reyreyn oo u muuqataa xitaa dhabta ilaaliye 4k. Iyadoo qaar ka mid ah raaxaysan qaybta by inaan orotonno Waxaana soo horjeeda iyo fulinta shaqo, muuqaalada ku xeeran sida waddooyinka iyo dhagaystayaasha ay ka mid yihiin daqiiqado jir halka ciyaareed waa qurux buuxda. Soo diyaariyay Codemasters, Ciid: wajahaya ayaa dhufaantid physics, multiplayer clunky, goobaha wadida xadidan oo hoos u qurbaan fursadaha tartanka reyreyn off-road iyadoo socdaa.
Call of Duty - Dagaalka Advanced
Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay muuqaallada badan ka wanaagsan yahay hore si technology 4k taxane mahad. Ayaa lagu daydo aadanaha ka samaysan yihiin, xoogna leh hub faahfaahsan oo ka dhigaysa waayo-aragnimo ciyaaraha yaabka leh. 4k caawisaa Advanced Dagaalka u leedahay in muuqaallada fiiqan hayo ciyaarta oo xiiso leh xitaa halka gurguurta oo dhulka ama socda goobaha dagaalka. Saamayn kale oo aad u fiican ee Call ciyaaro of Duty on 4K waa il-dhisayaa tegayo HUD ah; in ay u muuqato doonaa sida aad xiran joog Exo ah.
Ciyaarta ayaa la magacaabay for 'Graphics Best' iyo 'Best Art Style' waqtiga la sii daayo. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka 4k gebi quruxda ciyaarta bedelay. Waxaad in marna ay fakareen magaalada huurada-fuuli warshadaha fiiriyaa si loo qurxiyay la jiir & xidhmooyinka qiiq iyo Dunwall sida guri aad Lady Boyle ee xisbiga si Pub Hound Godadka. Laga soo bilaabo dhismaha Orwellian-ka qabno, duur-joogta Pandyssian yaab iyo saamaynta dhac ah, wax walba u muuqataa oo kaliya in meel la xiriira muuqaal ah kulankaan.
U dhimashada Light
Ciyaarta ayaa waxay leedahay sawiro aad u faahfaahsan oo u baahan doonaa awood GPU halis ah waayo-aragnimo ugu fiican. Technology ayaa 4k kaa caawinaysaa in aad si aad u aragto wax madarad oo cad iyo neefta qaadato inta aad eegto daaqad ama marka aad isticmaalayso hubka loo geysanayay zombies ah. Iyada oo wajiga weyn iyo naqshadeynta noole, kulankaan waa mid ka mid ah tusaalooyin fiican ee naqshadeynta 4k. Kulan Zombie ma aha wax caadi ah guud ahaan dhufto balse cusub 4K ciyaaraha ka dhigaysa layaab kulankaan.
Helitaanka kulan 4k ma xaqiijin doonaa waxqabadka HD Ultra. Si ay u raaxaystaan ​​waayo-aragnimo 4k, iyadoo la isticmaalayo kormeerayaasha 4k sidoo kale muhiim ah oo ay la socdaan ciyaaraha 4k. Kala duwan oo ka mid ah kormeerayaasha 4k waa laga helaa suuqa kasta oo leh waxyaabo kala duwan, xajmiga iyo qiimaha kala duwan. Si kastaba ha ahaatee waa mid aad u muhiim ah in aad go'aan ka gaarto waxa monitor waa in aad jeceshahay waayo-aragnimo guud.
Sidaas darteed, si ay u sameeyaan hawsha sahlan, waxaan heysanaa 3 ugu fiican kormeerayaasha 4k inoo diyaar ku qoran-gaaban,
Samsung UHD-QHD Monitor U28E590D 28-inji Screen LED-idmay Monitor
Ka sokow muuqaalka quruxda badan, monitor tani waa macaan oo la kala carar yar loogu ciyaaraha 4k. Xirnaanta ayaa xaqiiqdii waa fiican leh awoodda ay leedahay in la qabsadaan dhexeeya PC EE GPU iyo xisaabshaha. Monitor Tani waxay bixisaa 4K naqshadeynta ee 60Hz dhex HDMI 2.0, taas oo cusub oo ugu dambeeyay 4K kormeerayaasha PC. Habkaani wuxuu ku soo jiidasho waa la heli karo ee binta a yar. Iyada oo tirada pixel sare iyo isku midab fiican la heli karo, monitor tani waa mid ka mid ah ay ugu fiican marka ay timaado 4k ciyaaraha. Samsung U28E590D qabtaan shaqo aad u fiican ee lagu miisaamo wax walba in hab in ciyaartoyda uu u isticmaali karaa badan loo isticmaalo. Waa la awoodi karo, waxay bixisaa midabka weyn iyo koriyo baaxadda cirro fiican waqti fiican jawaab u ah dadka ciyaaraha ka.
Samsung 28-inji Ultra High Qeexid LED Monitor (U28D590D)
Samsung U28D590D, ilaaliye 4k, waxaa la heli karaa iyadoo 3840 X 2160 qaraarada in Ultra HD. Daawashada xagal ayaa af badan oo ay design qurux badan ka dhigaysa waayo-aragnimo ciyaaraha 4k dheeraad ah oo cajiib ah. Waxay leedahay tiro balaadhan oo ah taageero midabka kaas oo ku dhawaad ​​1 bilyan oo midabo ka dhigaya nuxurka ku-shaashadda si ay u muuqdaan faahfaahsan oo dheeraad ah, caqli gal ah oo dabiici ah. Xitaa markii ugu jawaab u UHD U28D590D waa sida ka yar 1 millisecond. Samsung monitor U28D590D isticmaalaa 8 million pixels bixinta images cajiib ah.
Acer B286HK ymjdpprz 28-inch UHD 4K Widescreen Display la ErgoStand:
Taxanahan oo B6 ee 4k monitor waxaa loo xirfad loogu talogalay inay daboolaan dalabaadka xagal daawashada kala duwan. Thanks to technology e-midabka Acer u saamaxaya in ay la kulmaan ugu caddeeyo iyo midabada pixel kasta comfy View bandhigay. Monitor waxay bixisaa 16.7 milyan oo midabo bandhigay, 0.32mm pixel garoonka iyo 2 mar millisecond jawaab kuwaas oo cajiib ah la feature bey'ada saaxiibtinimo design ah. Intaa waxaa dheer, waxa ay bixisaa Koox ka mid ah isku xirnaanta iyo sidoo kale-fekrado iyo jeeda iyo caddaymaha muuqaal ah, taasi Acer B monitor taxane waa doorasho wanaagsan ah miisaaniyada 4K monitor oo aan ku kici doona dime ah in dadka isticmaala iyo samatabbixin ah-aragnimo HD aalladda u 4K ciyaaraha sida iyo sidoo kale graphic xirfadeed iyo video tafatirka ee 3840 x 2160 pixels.
Sidaas go'aan ka darka aad rabto iyo bilowdo sahaminta adduunka ee ciyaaraha 4k sida marna ka hor.
> Resource > Video > 4K ay ciyaareyso ay - The kulan fiican iyo kormeerayaasha PC aad u